Archive du 20170308
Mandravarava i ENAWO 3 maty, 6 naratra mafy
Mahery vaika ny rivodoza Enawo izay niditra an-tanety tany Ampahana Antalaha omaly talata 7 martsa tamin�ny 12 ora antoandro.
Filoham-pirenena sy praiminisitra Tsy nisy tany Antsakabary
Ny minisitry ny asa vaventy, Eric Razafimandimby, izay sady minisitra mpiahy ny faritr�i Sofia no nirahin�ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny praiminisitra Mahafaly Olivier,
Distim sy vehivavy TIM Boriborintany faha-6 Hanao DIABE hihazo ny Lapan�ny tan�na etsy Analakely
Ho fanohanana an'i Neny Lalao Ravalomanana izay vehivavy voalohany nitantana ny Renivohitr' ity Nosintsika ity dia ho avy hanohana sy ankahery azy amin�ny adidy
Fosafosa amin�ny facebook Migadra herintaona i Hiary
Na dia efa nanala ny fitoriany an�ilay mpanakanto mpandrindra ny vondrona ao anaty tambajotra facebook �Fifosana hanatsarana people gasy�, Hiary Rampanoelina, daholo aza ireo voatohintohina rehetra tamin�ity raharaha ity dia tsy afa-bela ny voampanga.
Andron�ny 8 martsa Manohana mavitrika ny ben�ny tan�na ny fokontany 32 ao amin�ny Boriborintany fahefatra
Manohana mavitrika ny ben�ny tan�nan�Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana ny fokontany 32 ao amin�ny Boriborintany fahefatra
Hiary Rapanoelina Voaheloka 1 taona an-tranomaizina
Nivoaka omaly 7 martsa ny didim-pitsarana an�i Hiary Rapanoelina, ka sazy mihatra herintaona an-tranomaizina no azon�ity mpanakanto no azony.
Seha-pihariana �cacao� An-dalam-panatsarana
Notanterahina teny amin�ny Tana H�tel Antaninarenina ny filankevi-pirenena-pirenena momba ny �Cacao � na CNC andiany faharoa, nokarakarain�ny minisiteran�ny varotra sy ny fanjifana, ary niaraha-niasa tamin�ny tetikasa PIC.
Fampiakarana ny vidin-tsolika Tsy izahay no tompon�antoka, hoy ny GPLSS
Tsy miankina amin�ny kaompania sy ny mpaninjara solika ny fiakaran�ny vidin-tsolika eto amin�ny firenena fa kajy ifanarahan�ny fanjakana sy ny kaompanian-tsolika eo ambany fanaraha-mason�ny mpamatsy vola atao isaky ny voalohan�ny volana, hoy ny fikambanan�ireo mpaninjara solika na ny GPLSS.
� Vohitra Kanto Fihary� Nahasarik�olona tokoa
Efa iaraha-mahita ny haratsian�ny toetr�andro amin�ny faritra maro manerana ny nosy koa dia nandray fanapahan-kevitra ny minisiteran�ny mponina sy ny fitondram-panjakana fa dia hofoanana ny lanonana fankalazana ny andron�ny 8 martsa nokasaina hatao teny Mahamasina anio alarobia.